Drop wire clamp, also called flat cable clamp or ftth tension clamp can be used with telephone dobe waya USB , na ngwa anya eriri USB na FTTH, FTTX, FTTB ngwọta. Jera si dobe waya clamps akasị ji na Telecommunication.
The igwe anaghị agba nchara waya ịgbapụta na-enye ohere nrụnye nke ODWAC efe n'elu cable mwekota na ụlọ, okporo osisi, Strand na mbanye nko, osisi brackets, SS nko na ndị ọzọ na dobe waya oyiyi akwa na ngwaike. Nke nwere ike ọnọ ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ na FTTH-mwekota.
Idebe waya anchoring clamps na dobe waya arịọnụ oyiyi akwa dị na Jera si ngwaahịa nso. Eriri Optic USB eji jikọta na-adị mfe na-bulie dị ka n'ibu-eguzogide ma na dayameta nke FTTH eriri Optic USB.
Nka na ụzụ specificaton
All mgbakọ gafere tensile ule, ọrụ ahụmahụ na okpomọkụ sitere na site - 60 ° C ruo +60 ° C ule, okpomọkụ ịgba ígwè ule, merela agadi ule, corrosion eguzogide ule wdg
Maka echichi na-etinye ihe keikuku dobe waya USB na mwekota nke shei. Ebe a akụkụ nke erughị ala mwekota n'elu ngwa anya eriri ma ọ bụ ekwentị USB na-akpọlite ​​embossing, megide USB. Fanye nkpirikpi na shei. Wụnye ịgbapụta waya na dobe waya nko na fixate na shei.
Materials: igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ aluminum dobe waya mwekota ahu na waya ịgbapụta
Idebe waya anchoring clamps nwere ike arụnyere na nwụrụ anwụ-ọgwụgwụ, abụọ nwụrụ anwụ-agwụcha network cable ụzọ gasị.
Eriri optic dobe cable clamps imewe na-enye ohere idi a zuru ezu ibu enweghị cable ileghara na emebi.
Igwe anaghị agba nchara ihe ekwe nkwa ogologo oge nke ojiji. Full igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ plastic shims dị.
Ka FTTH mwekota factory Jera bụ ike ịmị a ODWAC ,Telecommunication mwekota from metal and aluminum, upon the request from customer. We also have appropriate for ODWAC , FTTH pole accessories.
Idebe mwekota s na ngwa anya eriri USB brackets dị ma iche iche ma ọ bụ ọnụ dị ka nzukọ.
Previous: USB Down ebute mwekota, DLT
Osote: FTTH dobe mwekota, S-Type / P-mwekota
Idebe optic mwekota
Idebe erughị ala mwekota
dobe Waya mwekota
dobe waya clamps
eriri optic cable clamps
Ewepụghị cable mwekota
FTTH mwekota factory
FTTH eriri optic cable
FTTH ODWAC mwekota
ftth erughị ala mwekota
FTTH dobe cable nko, YK-04
FTTH dobe mwekota, S-Type / P-mwekota